I-TeamKeeper: Isimanje Ukugcinwa Kwethalente nge-Management Analytics | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 28, i-2017 Douglas Karr
Ukuqashwa okusha kuholele kwinhlolokhono, kepha akukenzanga ngendlela obekulindelwe ngayo. Amalungu eqembu awashayi ama-quotas ngoba awatholi ukuqeqeshwa okufanele. Abathengisi abanethalente bayashiya inkampani ngoba abazizwa benza umsebenzi.
Umphathi wezentengiso udlala indima ebucayi kuzo zonke lezi zimo ezingenhla. Abaphathi abanamandla bangukhiye empumelelweni yenhlangano, kodwa kuphela Abasebenzi abangu-12% base-US bavuma ngokuqinile ukuthi abaphathi babo bayabasiza ukusetha okuza kuqala emsebenzini - futhi labo-12% bajabule kakhulu emsebenzini wabo kunabanye.
Lezi zinkinga kwaba ugqozi lwazo IthimbaKeeper, ipulatifomu entsha yokugcina ithalente efaka idatha ukuze inikeze izincomo ezenziwe zaba ngezakho zokuthola, ukuthuthukisa nokubandakanya abasebenzi.
I-TeamKeeper ithatha indlela eqhutshwa yidatha ekuphathweni kwethalente ngendlela eqinile yezibalo, ukuqinisekisa ukuthi ukuphathwa akuyona indlela yobukhulu obulingana nayo yonke indlela. Amasu nezikhuthazi zikaBonnie zehluke kakhulu kuJeff, futhi imininingwane enikezwe yiTeamKeeper ivumela umphathi ukuthi asebenze nalowo nalowo ngokufanele ukuze athole okuningi kubasebenzi bakhe. Ukuhlolwa okwakhelwe ngaphakathi kweTeamKeeper, ukubeka imigomo, amathuluzi wokuzibandakanya nokukleliswa komthelela kwenzelwe ukwenza abaphathi babe ngcono, ngakho-ke ngeke bazi nje ukuthi bazoqeqesha bani nokuthi nini, kodwa kanjani.
Kepha ithuluzi alisizi nje ekuphatheni ithalente elivele likhona; kusiza futhi ukuthola ithalente elisha elizolingana nendima. Ukuhlolwa okwenziwe ngabakwaTeamKeeper kubikezela ukuphumelela kwabaqokelwe ukufanisa izici zabo zezimfanelo nalabo abadingekayo ukwenza umsebenzi othile. Abathengisi bangenza kahle kakhulu ezingxoxweni (bayazi ukuthi bazithengisa kanjani!) Kepha umphathi angabona sekwephuze kakhulu ukuthi lowo muntu akawulungele lo msebenzi.
Njengoba kunikezwe ukuthi kubiza cishe 20% lomholo womsebenzi ukuze athathe isikhundla salowo muntu, futhi izinsuku 52 ukuze inkampani igcwalise izikhundla ezivulekile, ukwenza isinqumo esifanele sokuqasha kuqala kubaluleke kakhulu ngokombono wokusebenza kahle nowenzuzo. I-TeamKeeper isebenza njengethuluzi elilodwa eliphelele - kusukela ekutholeni kuya ekuqondeni kwethalente kuya ekufundiseni nasekuthuthukiseni. Ukuqasha amathalente aphezulu, ngenkathi futhi uqeqesha futhi uhilela amalungu eqembu akhona ngokwezidingo zawo ezihlukile, kuzosiza ekuqedeni inzuzo.
Idatha isiza ukuqhubekela phambili kwesikhathi eside kwesisebenzi, kodwa futhi inikezela isifinyezo sesikhathi sangempela ukunika abaphathi "ukushaya" emaqenjini abo. Ucwaningo olwenziwe ngezifiso lweTeamKeeper kanye namathuluzi okuphendula masonto onke kwenza kube lula ukwakha isiko lokuphendula, ukugcina abasebenzi bebandakanyekile nokwenza ngcono isimilo kulo lonke iqembu. Behlome ngale datha engenzeka, abaphathi banikwe amandla okugcina ithalente eliphakeme, bathola izilinganiso zokuthengisa futhi bandise imali engenayo yenkampani isiyonke.
Lokhu kuqonda kungadalula ikakhulukazi. Isibonelo, umphathi angahle angaboni ukuthi isisebenzi esithule noma esethuliwe sifisa ukufinyelela isikhundla somphathi, noma ukuthuthukisa ikhono elithile. Ngeke nje iTeamKeeper ikhiphe lolu lwazi, kepha izoletha namasu okuphatha ngokwezifiso ukusiza ukuthola okuningi kula malungu eqembu.
Amandla weplatifomu obuhlakani bamakhono ahlinzeka ngesitolo esisodwa sokusiza esisiza abaphathi bezentengiso ngemisebenzi ethile, kufaka phakathi:
I-Roster Building: Ukuhlolwa okwenziwe kwaba ngokwakho kubikezela ukuphumelela kwabaqokelwe ngokuqhathanisa izici zabo zezinhlamvu nalabo abadingekayo ukwenza umsebenzi othile.
Ukufundisa: Ukuhlolwa okwakhelwe ngaphakathi kweTeamKeeper, ukubeka imigomo, amathuluzi wokuzibandakanya nokukleliswa komthelela kudla i-Coaching Planner, ngakho abaphathi ngeke bazi nje ukuthi bazoqeqesha bani nokuthi nini, kodwa kanjani.
Ukuzibandakanya Nokwakha Amasiko: Ucwaningo olwenziwe ngokwezifiso kanye namathuluzi okuphendula masonto onke kwenza kube lula ukwakha isiko lokuphendula, ukugcina abasebenzi bebandakanyekile futhi bathuthukise isimilo kulo lonke iqembu.
Ukusetha Inhloso Nokulandela: Amathuluzi wokusetha izinjongo asiza abaphathi ekubekeni imigomo ecacile, elinganisekayo futhi etholakala ngokusetshenziswa kwezinhloso ze-SMART noma ama-OKR (izinhloso nemiphumela ebalulekile). Ukuthengiswa kokuvota kwama-imeyili okuzenzakalelayo kubuyela enqubekweni yabo futhi kuvuselele ideshibhodi yeQembuKeeper.
Ukuphathwa Kokuthengisa Okuqondiswayo: Iziphakamiso zansuku zonke zokwenziwa, amasu okuphatha elungu ngalinye leqembu kanye namathiphu obuholi nsuku zonke ngezinye zezindlela iTeamKeeper eyenza kube lula ukuthi ngisho nezimenenja eziluhlaza kakhulu zisebenze kangcono.
Ukuhlanganiswa: I-TeamKeeper ingahlangana nama-CRM amaningi asuselwa emafini, izinhlelo ze-HR nezinhlelo zokuphatha ukufunda. Kuyasiza futhi ukwehlukanisa amasilo phakathi kwe-HR nabaphathi ukukhomba abazobhapathizwa abazophumelela futhi bandise ukugcinwa kwabasebenzi.
Okusemqoka wukuthi ngokulalela abasebenzi nokwenza amasu okuphatha ngokwezifiso zabo, izinhlangano ziyakwazi ukukhulisa imali, inzuzo nokuziphatha ngenkathi zinciphisa umdlalo ezindaweni zokusebenza.
Tags: ukusetha imigomouhlu lwezakhiwoukuhlolwa kokuthengisaukuqeqeshwa kwezokuthengisaisiko lokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaukuzibandakanya kokuthengisaukulandela okulandelayoukuhlelwa kwemigomo yokuthengisaizinhloso zokuthengisaumthelela wokuthengisaukuphathwa kokuthengisasimo sokuthengisaukuthengisaumthengisi weqembu lokuthengisaunozinti